Abu Muscab ?beegsiga madaxda dowladda, shaqadeenna ugu badan ayey noqonaysaa hadda kadib? – Radio Daljir
Nofeembar 10, 2013 2:19 b 0
Baraawe, November 10, 2013 – Kooxda Al-shabaab ayaa xoojinaya awooddooda dhanka weerarada ka dhanka ah madaxda dowladda Soomaaliya iyo beegsida meelaha muhiimka ah ee la isugu tago, sida lagu sheegay war ka soo baxay kooxda xalay.
Afhayeenka dhanka howl-gallada kooxda Al-shabaab sheikh Cabdicasiis Abuu Muscab, waxaa uu sheegay in ay beegsan doonaan dhamaan dadka dowladda u shaqeeya iyo madaxda sar sare, waxaa uu ku hanjabay in ay meel kasta uga daba-geli doonaan.
?howlaheenna ugu badan ayey noqonaysaa ugaarsiga madaxda dowladda nooc walba oo ay yihiin.? Ayuu yiri Afhayeen Cabdicasiis Abuu Muscab.
Al-shabaab ayaa weerar halis badan ka fuliyey Muqdisho habeen hore, xilligaas oo ay dileen dad u badan shacab, balse ay ku jireen xubno la shaqeeya dowladda federaalka ah ee Soomaaliya.
Awoodda Al-shabaab ee dagaalka tooska ah ayaa sii diciifaysay tan iyo horraantii sanadkan, balse waxaa kordhay xilligaas kadib weerarada is qarxinta ah ee kooxdu la eeganayso gobolka iyo weeraro goos goos ah.
Baahin: Sabti, 9 Nov 2013, Caawa Iyo Daljir Weriye Cabdirisaaq C Cabdi Silver ~ Daljir ~ Galkacyo